शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए
काठमाडौं । शेयरमा ‘सिजन’ र ‘अफ सिजन’ को चर्चा गरिन्छ । वैशाखअघिको सयमलाई ‘अफ सिजन’ र चैतपछिको समयलाई ‘सिजन’ को रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले शेयर बजारको सिजन सुरु भएको छ । सिजन सुरु भएसँगै नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्न थालेकाले पनि शेयर बजारका सुधार आएको ब्रोकरको भनाइ छ ।
सिजन सुरु भएदेखि नै शेयर बजार मापक नेप्से निरन्तर उकालो लागेको छ । चैतसम्म खासै उकालो लाग्न नसकेको नेप्से वैशाख लागेपछि बढन पुगेको छ । अहिले शेयर बजार मापक नेप्से १३०७.७१ बिन्दुमा आइपुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको र ५, ६ महिनापछि उनीहरुले दिने लाभांशको अनुमान गर्न थालेकाले शेयर बजार बढेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । अन्य कारणभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी बढेकोले शेयर बजारमा सुधार आएको हो । शेयर बजार बढ्ने संकेत देखिएपछि सबैले शेयर खरिद गर्न थालेपछि नेप्से बढेको ब्रोकरको भनाइ छ ।
बजारप्रति नकारात्मक धारणा बनाउँदै आएका लगानीकर्ताले पछिल्लो समय सकारात्मक धारणा बनाउन पुगेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या सामाधान हुने अपेक्षा पनि लगानीकर्ताले गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढ्ने र त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने भएकाले तरलताको अभाव हट्ने अनुमान गरिएको छ । तरलताको अभाव अन्त्य भएमा शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरेकाले पनि शेयर बजारमा सुधार आएको ब्रोकरको भनाइ छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेका थिए । त्यसकै प्रभावका कारण शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको थियो । तर, अहिले तरलताको अभाव क्रमशः कम हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । लगानीयोग्य रकम अभावले ७–८ प्रतिशत ब्याजमा पाइने शेयर धितो कर्जा १४–१५ प्रतिशत पुगेको थियो । तरलतको अभाव हट्दै गएपछि कर्जाको ब्याजदर घटने र कम ब्याजदरमा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने आस गरेका छन् । यसले गर्दा पनि सेयर बजार बढेको हो ।
२०७३ साउन १२ गते कीर्तिमानी १८८१.४५ बिन्दुमा पुगेको नेप्से निरन्तर ओरालो लाग्दै आए पनि पछिल्ला दिनमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । १२ सय अंकभन्दा तल आइपुगेको नेप्से अहिले १३ सय अंक माथि पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएकाले पनि शेयर बजारमा सुधार आएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
२०७६ जेष्ठ ८ गते १३:४२ मा प्रकाशित
कोरियन कम्पनी र गोर्खा इको प्यानलवीच सम्झौता
ग्लोबल आइएमई बैंक र बि.एण्ड सी. मेडिकल कलेज बीच सम्झौता
बुधबार शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो यी पाँच जिल्लाको नतिजा (हेर्नुहोस सूचि)
नेप्सेमा ३ कम्पनीको ४४ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकरण, कुनको कति ?
कतै तपाईले ९ लाख ९० हजार कित्ता सेयर छुटाउनु त भएन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खुद नाफा ६ अर्ब ३८ करोड